AirTag, Xaqiiqada Dareenka leh, Dhagaha, iyo inbadan. Apple ee 2021 sida uu sheegayo Kuo | Waxaan ka socdaa mac
Kahor intan ay bilaaban 2021 waxaan u degnay shaqada iyo Waxaan soo aruurinnay xanta ku saabsan waxa laga filayo 2021 gacanta gacanta kula jira Apple. Sidoo kale waxaa sameeyay falanqeeye Ming-Chi Kuo iyo qaar kale. Waxaa la sheegay inay jiri doonaan sii deyn la filayo, cusbooneysiin cusub iyo qalab cusub oo la xiriira xaqiiqda la kordhiyay.
Waxaan horeyba ubilawnay 2021 waxaana la imaaday saadaalinta falanqeeyayaasha ugu caansan Apple. Waxaan diirada saareynaa saadaasha Ming-Chi Kuo ee caanka ah. In kastoo aysan ahayn wax ay ku qoraan guriga, waa inaan tixgalino sumcadda uu leeyahay iyo boqolkiiba jawaabaha saxda ah,
Kuo wuxuu sheeganayaa in 2021 waxay noqon doontaa sanadkii AirTags-ka. Waxaa lagu dhawaaqay inta badan 2o20, ma aysan gaarin suuqa. Waxay noqon doontaa sanadka 2021 markaan aragno tags caan ah Apple GPS, awood u leh helitaanka walxaha maalin kasta nolosheena.
Wuxuu sidoo kale ku dhiiraday inuu saadaaliyo imaatinka suuqa "hal shey kale". Laakiin ma uusan cayimin waxa ay noqon doonto, wuxuu kaliya sheegay inuu qalab cusub oo la xiriira xaqiiqda la kordhiyay imaan doono. MacRumors-ka sidoo kale ma qoyaan waxa Kuo u jeedaa. Waxaa laga yaabaa inaan ugu dambayn aragno muddo dheer la sugayay muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay, taas oo waliba si dheer looga hadlay.
Inta kale ee saadaashu waa halkii a xaqiijinta wax kasta oo la sheegay intii lagu jiray 2020. Magac ahaan:
Waxaan arki doonaa imaatinka dhagaha dhagaha cusub oo wata naqshad la mid ah AirPods Pro, laakiin iyadoon la helin, waxay lahaan doonaan tikniyoolajiyadooda oo dhan laakiin waxay qeyb ka noqon doonaan sii socoshada tusaalaha koowaad. Marka waan arki doonaa 3 AirPods.
Imaatinka Macs cusub oo wata M1 chip. Sidaas waxaa yiri Apple.
Qalabka leh Mini hogaamin. Laakiin Kuo ma sheegayo waxay noqon doonaan sidoo kale.
New iPad Pro 12,9 inji
Markaad aqrinaysid, markan Ming-Chi Kuo wax khatar ah gelin saadaashooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirTag, Xaqiiqada Dareenka leh, Dhagaha, iyo inbadan. Apple ee 2021 sida uu qabo Kuo